Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Quinapril (ကွီနာပရေးလ်)
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Quinaprilကိုသွေးတိုးရောဂါအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ သွေးတိုးချပေးခြင်းဖြင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ခြင်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆေးကို နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်းတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်၏။ Quinaprilသည် ACEI ဆေးအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ သွေးကြောများကိုပြေလျော့စေပြီးသွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအစာရှိရှိမရှိရှိသောက်နိုင်ပါသည်။ များသေားအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်သာသောက်ရ၏။ အဆီများသောအစာများကဤဆေးအားခန္ဓါကိုယ်မှ စုပ်ယူမှုကိုကျစေနိုင်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ချရန်အတွက် ဆရာဝန်က ဤဆေးကိုပမာဏနည်းနည်းမှစပေးပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်ညွှန်သည်များကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာပေးပါ။
သွေးတိုးကုသရန်အတွက် ဆေးမှအကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရန် ၁-၂ ပတ်ကြာတတ်၏။ နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်းအတွက်ဆိုရက်သတ္တပတ်မှ လအထိကြာတတ်ပါသည်။
ဤဆေးကုန်၌ မဂ္ဂနီစီယမ်ပါသောကြောင့် တစ်ချို့ဆေးများစုပ်ယူမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များသိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Quinaprilကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Quinaprilကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Quinaprilဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Quinaprilအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Quinaprilကိုမသောက်ခင် ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ် တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အားပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သောမျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းတို့၌ ဖူရောင်ခြင်း၊ သွေးစစ်ထုတ်သည့် လုပ်ထုံးများ (LDL apheresis, dialysis)၊ သွေးတွင်းပိုတက်စီယမ်များခြင်း၊ အသည်းရောဂါများ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခန္ဓါကိုယ်မှဆေးကိုတုံ့ပြန်နေစဉ် ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ မောပန်းခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့လည်း ဖြစ်နိုင်၏။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သောပိုတက်စီယမ်များသည့်လက္ခဏာများ (ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းမမှန်ခြင်း)၊ မူးမေ့လဲခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။ Quinaprilကိုကျောက်ကပ်ပြဿနာများကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန် အသုံးပြုကြသော်လည်းရှားပါးစွာဖြင့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာများဖြစ်လာစေနိုင်သလိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။ Quinaprilသောက်နေစဉ် ဆရာဝန်မှ သင့်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ကျောက်ကပ်လက္ခဏာဖြစ်သောဆီးပမာဏပြောင်းသွားခြင်းရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပြပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
တစ်ချို့ထုတ်ကုန်များတွင် သွေးတိုးစေပြီး နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်းကိုပိုဆိုးစေသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သုံးနေသည့်ဆေးများ (အထူးသဖြင့် အအေးမိချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်စာ၊ NSAIDs ibuprofen/naproxen) စသည်များကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။
ပျား၊ နကျယ်တုပ်၍ ထိုးဆေးများသုံးလိုက်ရပြီးQuinapril ကိုသောက်နေပါသည်ဆိုပါက ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်ပြုမှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သင်သုံးနေသည့်ဆေးများအားလုံးကို ဆရာဝန်သိအောင် သေချာပြောပြရန်အရေးကြီး၏။
Quinaprilသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Quinapril က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Quinaprilသည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကနဦးပမာဏ: ဆီးဆေးမပေးရသောလူနာတွင် 10 or 20 mgတစ်ရက်တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ: 20 to 80 mgကိုတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်အညီအမျှခွဲသောက်ရန်။
ကနဦးပမာဏ:5mgတစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်။
ထိန်းညှိပမာဏ: 20 to 40 mgကိုတစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်အညီအမျှခွဲသောက်ရန်။
– ဤပမာဏသည် နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်း၏ လက္ခဏာများကိုသက်သာစေသော်လည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်နိုင်ချိန် တိုးလာစေရန်အတွက် ပမာဏအများကြီးလိုပါလိမ့်မည်။
– ကနဦးပမာဏပေးချိန်တွင် ဆေးဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပါကအာနိသင်ရှိသည့်ပမာဏရောက်အောင် တစ်ပတ်စီခြားပြီးချိန်ညှိရပါမည်။
– နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်းတွင် ဆီးဆေး၊ digitalis တို့ထည့်လိုက်ပါကတွဲဖက်ပေးရသောကုထုံးအဖြစ် သုံးနိုင်ပါသည်။
တစ်ရက်လျှင် 10 mg တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
– ပမာဏကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ပေးသည့်အတိုင်းချိန်ညှိရမည်။
သွေးတိုးအတွက် အသက်ကြီးသူသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
CrCl greater than 60 mL/min: ကနဦးပမာဏ: 10 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
CrCl 30 to 60 mL/min: Initial dose:5mgတစ်ရက်တစ်ကြိမ်
CrCl 10 to 30 mL/min: Initial dose: 2.5 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
– သွေးတိုးအတွက်သုံးသောပမာဏကိုသွေးပေါင်မှ တုံ့ပြန်သည့်အမြင့်ဆုံးအမှတ် (ဆေးပေးပြီး ၂- ၆ နာရီအကြာတွင် တိုင်းသောအမှတ်) အတိုင်းပေးရပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဆေးပမာဏချိန်ညှိခြင်းကို အနည်းဆုံး၂ ပတ်ခြားပြီးလုပ်သင့်၏။
– ဆေးချိန်နေသည့်ကာလအဆုံးနားရောက်သည့်အခါ သွေးတိုးကျသည့်အာနိသင်ပြယ်လာသူများ၌ ဆေးပမာဏတိုးခြင်းသို့မဟုတ် တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်ပေးခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ 40 to 80 mgကိုခွဲပေးခြင်းကဆေးချိန်ညှိသည့်ကာလအဆုံးနားရောက်စတွင် အာနိသင်တိုးလာစေနိုင်သည်။
– နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်းအတွက်သုံးသောပမာဏများကိုတော့ လိုအပ်သည့်အာနိသင်ရောက်သည့်တိုင် ၁ ပတ်ခြားစီဆေးချိန်ညှိသင့်ပါသည်။ သို့မှသာမလိုလားအပ်သည့် သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ orthostasis, နှင့် azotemiaများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
– သွေးပေါင်ကိုထိန်းမရဘူးဆိုပါကဆီးဆေးထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ကနဦးဆုံး5mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်သောက်ခြင်းအားသွေးပေါင်ငြိမ်သည်အထိဆေးပညာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ပြုလုပ်ရပါမည်။
– သွေးပေါင်ထိုးကျခြင်းသို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းမျာသိသိသာသာပျက်ခြင်းမရှိသည့်အခါ clinical နှင့် hemodynamicတုံ့ပြန်မှုများပေါ်အခြေခံပြီးဆေးပမာဏတိုးနိုင်ပါသည်။
Hemodialysis နှင့် peritoneal dialysis : quinaprilစွန့်ထုတ်မှုတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။
– သွေးတိုးကိုquinaprilတစ်မျိုးတည်းနှင့် ထိန်းမရနိုင်ပါကဆီးဆေးတစ်မျိုးထပ်ပေါင်းနိုင်သည်။
သွေးပေါင်ကျနိုင်ချေအားလျော့ချရန် ဆီးဆေးများကို ဖြစ်နိုင်ပါကquinaprilမစခင် ၂- ၃ရက် ကြိုတင်ပြီး ဖြတ်ထားသင့်ပါသည်။
– နှလုံးနှင့်သွေးကြော: သွေးပေါင်ကိုသေချာစောင့်ကြည့်ပါ။
– ကျောက်ကပ်: ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
– Metabolic : လျှပ်ကူးသတ္တုဓါတ်များကိုသေချာစောင့်ကြည့်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Quinapril (ကွီနာပရေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Quinaprilကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Quinaprilကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။